12 Ndị Ifrem wee zukọta ma gafere n’ebe ugwu wee sị Jefta: “Gịnị mere i ji gaa buso ụmụ Amọn agha, ị kpọghị anyị ka anyị soro gị gaa?+ Anyị ga-agbakọta gị na ụlọ gị ọkụ.”+ 2 Ma Jefta gwara ha, sị: “Mụ na ndị m na ụmụ Amọn+ sere ezigbo okwu. M wee kpọọ unu ka unu nyere m aka, ma unu azọpụtaghị m n’aka ha. 3 Mgbe m hụrụ na unu abụghị ndị nzọpụta, m kpebiri itinye mkpụrụ obi m n’ihe ize ndụ+ ma gaa buso ụmụ Amọn agha.+ Jehova wee nyefee ha n’aka m. Gịnịzi mere unu ji bịa imegide m taa ibuso m agha?” 4 Jefta kpọkọtara ndị Gilied+ niile ozugbo wee buso Ifrem agha; ndị Gilied wee gbuo ndị Ifrem, n’ihi na ha sịrị: “Ndị si n’Ifrem gbapụ ka unu bụ, unu Gilied, unu si n’etiti Ifrem, n’etiti Manase.” 5 Gilied wee buru ndị Ifrem ụzọ weghara ebe ndị a na-eji ụkwụ agafe osimiri Jọdan;+ o wee ruo na mgbe ndị Ifrem ndị na-agba ọsọ sịrị: “Ka m gafere,” ndị Gilied na-asị onye ọ bụla n’ime ha: “Ị̀ bụ onye Ifrem?” Ọ bụrụ na ọ sị: “Ee e!” 6 ha asị ya: “Biko, kpọgodị Shibolet.”+ Onye ahụ asị: “Sibolet,” n’ihi na ọ gaghị akpọtali okwu ahụ. Ha na-ejide ya ma gbuo ya n’ebe ndị a na-eji ụkwụ agafe osimiri Jọdan. Ndị nwụrụ mgbe ahụ n’ime ndị Ifrem wee bụrụ puku mmadụ iri anọ na abụọ.+ 7 Jefta wee kpee Izrel ikpe ruo afọ isii, e mesịa, Jefta onye Gilied nwụrụ, e wee lie ya n’obodo ya nke dị na Gilied. 8 Mgbe ọ nwụsịrị,+ Ịbzan onye Betlehem+ malitere ikpe Izrel ikpe. 9 O wee mụọ ụmụ ndị ikom iri atọ na ụmụ ndị inyom iri atọ. O wee zipụ ndị ozi, ha wee si n’agbụrụ ndị ọzọ lụtara ụmụ ya ndị ikom ụmụ nwaanyị iri atọ. O wee kpee Izrel ikpe ruo afọ asaa. 10 Ịbzan wee nwụọ, e wee lie ya na Betlehem. 11 Mgbe ọ nwụsịrị, Ilọn onye Zebulọn+ malitere ikpe Izrel ikpe. O wee kpee Izrel ikpe ruo afọ iri. 12 Ilọn onye Zebulọn wee nwụọ, e wee lie ya n’Aịjalọn nke dị n’ala Zebulọn. 13 Mgbe ọ nwụsịrị, Abdọn nwa Hilel onye Piratọn+ malitere ikpe Izrel ikpe. 14 O wee mụọ ụmụ ndị ikom iri anọ na ụmụ ụmụ iri atọ bụ́ ndị na-agba ịnyịnya ibu iri asaa tojuru etoju.+ O wee kpee Izrel ikpe ruo afọ asatọ. 15 Abdọn nwa Hilel onye Piratọn wee nwụọ, e wee lie ya na Piratọn nke dị n’ala Ifrem, n’ugwu ndị Amalek.+